Umvelisi weGear Spur | Umgangatho ophezulu kunye netekhnoloji ephezulu-Ngamandla onke
Ikhaya / gear / Gxuma iGear
Amagiya e-Spur zezona zixhobo ziqhelekileyo zibonakala ngokulula ezihambisa intshukumo phakathi kwemingxunya emibini efanayo. Ngenxa yobume babo, bahlelwa njengohlobo lweegesi zezilinda. Kuba imiphezulu yezinyo zegiya iyafana nee-axes ze-shafts ezixhonyiweyo, akukho mandla okunyusa ukwenziwa kwicala le-axial. Kwakhona, ngenxa yemveliso elula, ezi zixhobo zinokwenziwa kwinqanaba eliphezulu lokuchaneka. Kwelinye icala, izixhobo zokuqhubela phambili zinokungalunganga kuba zenza ingxolo ngokulula. Ngokubanzi, xa iigear ezimbini zokuhamba zikwimingxunya, izixhobo ezinamazinyo amaninzi zibizwa ngokuba yi "gear" kunye nenani elincinci lamazinyo kuthiwa yi "pinion".
Njengomnye wabavelisi bezixhobo zokuqhubela phambili kunye nabanikezeli eTshayina, siyakwamkela ngokufudumeleyo ukuba uthenge okanye uthengise izixhobo zokuthengisa ezenzelwe eChina apha zivela kumzi-mveliso wethu.
Izixhobo zePlastiki Spur
Izixhobo zeSpur (Umgangatho waseYurophu)
Sisebenzisa ii-cookies ukuqinisekisa ukuba sikunika amava afanelekileyo kwiwebsite yethu. Ukuba uqhubeka usebenzisa le ndawo siya kuthatha ukuba uyavuya ngayo.NdiyifumeneUmthetho wabucala